Iindaba - "I-LUXMAIN" igqibezela ubume be-long-spectrum yamandla esithuthi esitsha esiphakamisa ibhetri yetroli
"I-LUXMAIN" igqibezela uyilo lwe-spectrum ende yesithuthi esitsha esiphakamisa ibhetri yetroli
Ukusukela ukuhla kwamandla ebhetri yamandla esithuthi sokuqala esitsha kunye nokuphakamisa iqonga kwafakwa kwintengiso ngo-2017, "i-LUXMAIN" inikezelwe kwintengiso yezixhobo ezikhethekileyo zezithuthi zamandla amatsha, kwaye iphumelele ngempumelelo "ekhethekileyo", "yendalo iphela" kunye " ukuhamba ngokuzenzekelayo ". Uthotho ezintathu ngaphezulu kwe-10 imifuziselo amandla ibhetri disassembly kunye nebandla lift iilori ziye zonyulwa okanye ekucetyiswa brand ngu automakers ezininzi. Zifakwa kwiivenkile zokulungisa iimoto, kwiifektri ezintsha zamandla e-auto, nakwiikholeji ezizenzekelayo.
Phakathi kwabo, izixhobo zamkela i-electro-hydraulic drive, isilinda yeoyile iphakama kwaye iwele ngokuthe nkqo, amandla omelele, ukukhuhlana kunye namandla okucheba isilinda yeoyile zincinci, kwaye ubomi benkonzo bude.
Izixhobo zixhotyiswe nge-bracket yokunyusa enokubuyiseka, enokuqonda ukuguqulwa kweemilo ezahlukeneyo kunye nokuphakamisa izikhundla, kwaye kufanelekile ukuphakamisa iibhetri zobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo, oko ke kuphula imilo ebekiweyo kunye nobungakanani beqonga lokuphakamisa Khokelela ku umda wohlobo olunye kuphela lwebhetri.
Isibiyeli sinokujikeleza i-360 °, kwaye ukuphakama kokuphumla kwesundu kuyahlengahlengiswa. Jikelezisa isibiyeli ukuhlangabezana neemfuno zeebhetri ngeendlela ezahlukeneyo zokufaka. Ukuphakama kweempumlo ezine zesundu kunokulungiswa kakuhle ukufezekisa ukuthambeka kweekona ezininzi. Kwangelo xesha, isibiyeli sinokujikeleziswa kancinci ukuqinisekisa ukuba umngxunya webhetri kunye nomngxunya wokulungisa umzimba ulungelelaniswe ngokuchanekileyo.
Amandla okhetho e-DC12V kunye ne-AC220V, ukuguquguquka okukhulu kokusebenza.
Ukuxhotyiswa ngotshintsho lokumisa okungxamisekileyo kunye nesiphatho sokulawula ucingo, lo msebenzi ukhuselekile kwaye ulunge ngakumbi.
Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Isilinda esibambeleyo esinye, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo,